Hiran State - News: HS:- Wafi uu hogaaminayey R/wasaaraha Somaliya oo si diiran loogu soo dhaweeyey Hiiraan
HS:- Wafi uu hogaaminayey R/wasaaraha Somaliya oo si diiran loogu soo dhaweeyey Hiiraan
HS:- Magaalada Belet Weyne oo si Soomaalinimo leh loogu soo dhaweeyey wafti ka socda Dowlada uuna hogaaminayo R/wasaare Gaas.
Wafiga R/wasaaraha ayaa safarkiisa waxaa ku wehliya wasiiro iyo saraakiisha ciidamada. magaaalada Belet Weyne oo ah caasimada Hiiraan waxaa maanta siweyn nabadgalyada u sugaya xoogaga Hiiraan oo dhawantan kooxda Shabaab kala wareegay gacan ku heynta magaalada siweyna u wiiqay awoodii Shabaabka Hiiraan.
Magaalada Belet Weyne ayaa waxaa maanta lagu deeyey boqolaal dhar cad ah iyo ciidamada xoogaga Hiiraan oo goobkasta iyo luuq kastaba taagan iyagoo siweyn u hubeysan. waftiga R/wasaaraha oo aan qarkood waligood tagin magaalada Belet Weyne ayaa aad ula yaabay sidey magaalada u dhisan tahay iyo sidey u maqli jireen in maalinkasta dagaal uu ka dhaco.
Waftiga ayaa mudada ay joogaan la kulmi doona masuuliyiinta ku sugan gudaha magaalada iyo waxgaradka Hiiraan iyo xildhibaanada reer Hiiraan ee mudada badan ciidanka kula jiray duurka iyadoo ay TFGdii ay ka tirsanaayeen dhegaha ka fureysatay guud ahaan shacabka iyo siyaasiyiinta Hiiraan.Tan iyo markii uu hogaanka dalka qabtay madaxweyne Shiikh Shariif waxaa soo baxayey hagardaamo iyo eex ku dhisneyd qabyaalad waxaana reer Hiiraan loola dagaalay si aan caadi aheyn.
Waxaa looga dhaartay iney jagooyin fiic fiican ka qabtaan xukumada.
Awoodii iyo xilalkii dowlada waxaa isku koobay oo kaliya dhawr beelood oo ka soo jeeda hadba R/wasaarahii markasi jooga, madaxweynaha iyo waliba gudoomiyahii hore ee baarlamanka ee shaqadiisii laga ceyriyey Shariif Hasan.
Waxa looga dhaartay deeqahii waxbarashada iyo deeqahii magaca umada Soomaaliyeed lagu
helay. Jagooyinka marka reer Hiiraan oo dhan leysku daro xilalka ay ku leeyahiin TFGda waxaa ka badan beesha uu ka soo jeedo R/wasaare Gaas oo hal qabiil ah.Xoogaga reer Hiiraan dagaal joogto ah ayey ku jireen tan iyo Jun,18/2009 xiligaasi oo ahaa markii bartamaha magaalada Belet Weyne maalin cad la dhigay in ka badan 100 ruux oo waxgarad reer Hiiraan ah oo uu ku jiray ala ha u naxariistee wasiirkii Amniga Cumar Xaashi iyo Amb Laqanyo.
Madaxweynaha Soomaaliya kooxda Shabaab bulshada Soomaaliyeed qaarne xoolahooda, degaankooda iyo dumarkooda ayey lahaadeen oo ay gumeysan jireen koxda Shabaab,laakinse reer Hiiraan dagaal joogto ah ayey ku wadeen kooxda argagixisada ah dhegaha ayuu ka fureystay codsiyo badan oo kaka yimid masuuliyiinta TFGda ugu jira reer Hiiraan sida xildhibaanda, wasiirada, waxgaradka, aqoonyahanada ilaa ay reer Hiiraan qiraan in Shariifka iyo shabaab aysan waxbo is dhaamin.
Si kastaba Shabaab waxaa la dul dhigay Hiiraana xoreeyey ilaah ka sokow wiilasha maanta R/wasare Gaas ku soo dhaweyey magaalada Belet Weyne oo xitaa loo quuri waayey in maalin kaliya TFGdu ku guuleysan weysay iney u qirto dagaalka iyo geesinimada ay muujiyeen iyagoo cidamada ku sugan gobolka Gedo xiligi Farmaajo lacagaha, cuntanada iyo qalabka ay u baahan yahiin loogu geynayey Gedo.
Hadaba reer Hiiran oo intaas lagu soo sameeyey maanta casimadoodii waa u xor waxeyna hada ku mashquulsan yahiin sidii ay degaankooda ugu sameysan lahaayeen maamul ku yimid rabitaanka waxgaradka, aqoonyahanada, Ugaasyada, Wabarada, culimada reer Hiiraan iyagoona markaan u midoobi doona danahooda gaarka ah mida Somaliweyna kaalin wax ku ool ah ka qaadan doono.
Magaalada Belet Weyne oo ah magaalo ay ku faani jireen bulshada Somaliyeed ahna meesha ay ka bilaabato qaranimada Somaliyeed waxaa dagaal qabiil oo toos ah bulshadooda la galay madaxweynaha hada talada haya Shiikh Shariif oo waliba siweyn loogu soo dhaweeyey halkaas ka hor intii uusan noqon madaxweyne Somaliyeed.
Safarka R/wasaaraha oo qadan doona oo kaliya 1 maalin waxaa Hiiraan kaka haraya siyaasiyiinta ka soo jeeda Hiiraan oo uu ugu horeyo wasiirka qorsheynta. Hiiraan in aysan ka dhalan maamul goboleed xoogan ka awood badan midka Puntland waxaa ilaah ka sokow ku heshiiyey siyaasitiinta ay ka soo jeedaan beelaha madaxweynaha iyo R/wasaaraha. waxeyna xal u arkeen in Puntlandna noqdo maamul goboleed maalinkasyana ay sameystaan degmooyin iyo tuulooyin hor leh reer Hiiraana waxkasta oo ay dhistaan ay diidaan.
Sikastaba waxa maanta Hiiraan ku sugan R/wasaare Gaas waxeyna u badan tahay in Shiikh Shariifna gaaro maalmaha inagu soo aadan si loo dhameeyo mugdiga ku kala dhex jira TFGda iyo bulshada Hiiraan oo hadii uu hagaago wax weyn ka bedelaya xaalada cakiran ee Soomaaliya.
Welcome Hiiraan ayaanu leenahay muwaadin kasta ee Somaliyeed Hiiraan waa dhulkiinii iyo dalkiinii ayaa ka mid ahaa ereyada maanta lagu soo dhaweeyey waftiga R/wasaraha Soomaaliya Prof C/wali Gaas oo maanta ku qadeynay qudaar fresh ah iyo caano. waftiga R/wasaaraha iyo masuuliyiinta Hiiraan ayaa hada ku jira shir xasasi ah.
Wafdiga Ra’isulwasaaraha ayaa waxaa ka mid ah Ra’isulwasaare Kuxigeenka ahna Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Mudane Xuseen Carab Ciise,Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta,Boostada iyo Isgaarsiinta Mudane C/qaadir Xuseen Maxamed Jahweyn,Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga Mudane C/laahi Goodax Barre,Taliyaha Ciidammada Xoogga Dalka Soomaaliyeed General C/qaadir Sheekh Cali Diini iyo Xildhibaanno Baarlamaanka ka tirsan.
La soc wararkeena danbe
· admin on January 06 2012 12:13:46 · 0 Comments · 2007 Reads ·
14,600,230 unique visits